Zimbabweans Complete U.S. Sponsored Community Program VOASites by Language
Sunday, February 14, 2016 Local time: 16:33
Zimbabweans Complete U.S. Sponsored Community Program Print
WASHINGTON— Participants from 22 countries, this week wrapped up a fellowship on community development in Washington DC promising to take their newly-acquired skills and knowledge back home to help transform their communities.
The program, sponsored by the U.S State Department's Professional Fellows Division implemented by the International Research and Exchanges Board in conjunction with Community Solutions, brought more than 50 leaders to America to learn how their American counterparts handle similar challenges. The participants hailing from countries such as Peru, Nepal, Albania and Malawi - including 4 from Zimbabwe - went to various U.S states during the four-month duration of their program.
Nyarazo Mashayamombe, director and founder of Tag a Life International Trust, works to protect young girls in Zimbabwe. Mashayamobe said she was overwhelmed by the experience and that her work in the state of Oregon will help her continue to assist young girls in Zimbabwe.
Report By Tatenda Gumboi